क्याफ्री ईश्वर, वर्ल्डवाइड चर्च अफ गोड स्विट्जरल्याण्ड (WKG)
आजको समाज, विशेष गरी औद्योगिक संसारमा बढ्दो दबाबमा छ: धेरै जसो मानिसहरू निरन्तर कुनै चीजको दबाबमा रहेको महसुस गर्छन्। व्यक्ति समयको अभाव, प्रदर्शन गर्न दबावबाट ग्रस्त हुन्छन् (काम, विद्यालय, समाज), वित्तीय कठिनाइ, सामान्य असुरक्षा, आतंकवाद, युद्ध, गम्भीर मौसम विपत्ति, एकाकीपन, निराशा, आदि। आदि। तनाव र निराशा दैनिक शब्दहरु, समस्याहरु, बिमारीहरु भएका छन्। धेरै क्षेत्रमा ठूलो प्रगति भए पनि (टेक्नोलोजी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति) व्यक्तिलाई सामान्य जीवन बिताउन अझ बढी कठिनाइ भएको देखिन्छ।
केही दिन अघि म बैंक काउन्टरमा लाइनमा थिएँ। मेरो अगाडि बुबा हुनुहुन्थ्यो जो उनको बच्चा हुनुहुन्थ्यो (सायद4वर्ष पुरानो) उनीसँग। केटाले लापरवाह, लापरवाह र आनन्दले भरिएको हो। भाइबहिनी, यो अन्तिम मलाकी कहिले थियो र हामीले कस्तो महसुस गर्यौं?
हुनसक्छ हामी केवल यो बच्चालाई हेर्छौं र भन्छौं (थोरै डाह): «हो, ऊ एकदम लापरवाह छ किनकि उसलाई यस जीवनमा के आशा गर्ने भनेर पनि थाहा छैन! यस मामलामा, तथापि, हामी जीवन मा एक मौलिक नकारात्मक दृष्टिकोण छ!
मसीहीहरूको हैसियतमा हामीले हाम्रो समाजको दबाबको प्रतिरोध गर्नुपर्छ र भविष्यमा सकारात्मक र विश्वासका साथ हेर्नु पर्छ। दुर्भाग्यवस, इसाईहरूले प्राय: आफ्ना जीवनहरू नकारात्मक, कठिनाइको रूपमा अनुभव गर्दछन् र उनीहरूको सम्पूर्ण प्रार्थना जीवन एक खास अवस्थाबाट मुक्त गर्न परमेश्वरलाई बिन्ती गर्छन्।
तर हामी बैंकमा हाम्रो बच्चालाई फर्कौं। उसको बुबाआमासँगको सम्बन्ध कस्तो छ? केटा भरोसा र विश्वासले भरिपूर्ण छ र त्यसैले उत्साह, joie de vivre र जिज्ञासाले भरिएको छ! के हामी उहाँबाट केही सिक्न सक्छौं? भगवानले हामीलाई आफ्नो बच्चाको रूपमा हेर्नुहुन्छ र उहाँसँगको हाम्रो सम्बन्धमा पनि त्यस्तै स्वाभाविकता हुनुपर्दछ जुन बच्चाले आफ्ना बाबुआमालाई देखाउँदछ।
"अनि जब येशूले एउटा बालकलाई बोलाउनु भयो, उहाँले त्यसलाई तिनीहरूका बीचमा राख्नुभयो र भन्नुभयो:" साँच्‍चै, म तिमीलाई भन्दछु, यदि तपाईं पछि हटेर केटाकेटीहरूजस्तो हुनुभएन भने तिमी कुनै पनि हालतमा स्वर्गको राज्यमा पस्न पाउनेछैनौ। यसकारण यदि कोही आफैले हो भने स्वर्गको राज्यमा सब भन्दा ठूला छोरालाई जस्तै अपमान गर्ने छ » (मत्ती १०: १ -18,2 -२०)
भगवानले हामीलाई बच्चा भर्ती गरेको आशा गर्नुहुन्छ जुन अझै पनि पूर्ण रूपमा आमाबुवालाई सुम्पिएको छ। बच्चाहरू प्रायः निराश हुँदैनन्, तर आनन्द, आत्मा र विश्वासले भरिएका छन्। परमेश्वरसामु आफूलाई नम्र तुल्याउनु हाम्रो काम हो।
परमेश्वर हामी प्रत्येकबाट जीवनको लागि बच्चाको मनोवृत्तिको आशा गर्नुहुन्छ। उहाँ हाम्रो समाजको दबाब महसुस गरेको वा महसुस गरेको उहाँ चाहनुहुन्न, तर उहाँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरमाथिको विश्वस्त र अटल विश्वासको साथ अपेक्षा गर्नुहुन्छ:
«सधैं प्रभुमा रमाउनुहोस्! फेरि म भन्न चाहन्छु: रमाउनुहोस्! तपाईको कोमलता सबै व्यक्तिलाई थाहा हुनुपर्दछ; प्रभु नजिक हुनुहुन्छ। [फिलिप्पी::]] कुनै कुराको लागि चिन्ता नलिनुहोस्, तर सबै कुरामा प्रार्थना र अन्तरबिन्तीका साथ धन्यवादका साथ तपाईंको चिन्ताको विषय परमेश्वरलाई चिनाउनुपर्दछ; र परमेश्वरको शान्ति, जो सारा दिमागले छोपेको छ, त्यसले तपाईंको हृदय र विचारहरू येशू ख्रीष्टमा राख्नेछ। (फिलिप्पी 4,4: --7)
के यी शब्दहरूले साँच्चै जीवनमा हाम्रो दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित गर्दछ वा पर्याप्त छैन?
तनाव व्यवस्थापनसम्बन्धी लेखमा मैले एउटी आमाको बारेमा पढें जसले दाँतको कुर्सीको निम्ति लामो पल्ट सुत्न सक्ने र आराम गर्न सक्ने भए। म स्वीकार गर्दछु यो पहिले नै मलाई भएको छ। केहि पूर्ण रूपमा गलत भइरहेको छ यदि हामी दन्त चिकित्सकको ड्रिल मुनि "आराम" गर्न सक्छौं भने!
प्रश्न यो छ: हामी प्रत्येकले फिलिप्पी 4,6..। लाई कत्ति राम्रो बनाउँछौं ("केहि चिन्ता नलिनुहोस्")? यस तनावपूर्ण संसारको बिचमा?
हाम्रो जीवनमा नियन्त्रण परमेश्वरको हो! हामी उसका बच्चाहरू हौं र उहाँलाई रिपोर्ट। हामी केवल तनावमा आउँछौं यदि हामी आफ्नो जीवनलाई आफैंमा नियन्त्रण गर्न प्रयास गर्दछौं, आफ्ना समस्याहरू र समस्याहरू आफैंमा समाधान गर्न। अर्को शब्दमा, यदि हामी आँधीबेहरीमा केन्द्रित भयौं र येशूको दृष्टि गुमाउँछौं भने।
हाम्रो जीवनमा हामी कत्ति थोरै नियन्त्रण गर्छौं भन्ने महसुस नगरेसम्म भगवानले हामीलाई सीमामा धकेल्नुहुनेछ। यस्तो अवस्थामा, हामी आफैंलाई परमेश्वरको अनुग्रहमा हालिनुबाहेक अरू कुनै विकल्प हुँदैन। दु: ख र कष्टले हामीलाई परमेश्वरतिर पुर्‍याउँछ। यी एक इसाईको जीवनको सबैभन्दा कठिन पलहरू हुन्। जे होस्, ती क्षणहरू जुन विशेष रूपमा प्रशंसा गर्न सकिन्छ र यसले गहिरा आध्यात्मिक आनन्द पनि ट्रिगर गर्नुपर्दछ:
"भाइहरू हो, यो शुद्ध आनन्दलाई विचार गर्नुहोस्, यदि तपाईले आफ्नो विश्वासको रखरखावले लगनशील हुनुको कारण बुझ्नुभयो भने धेरै किसिमले आफूलाई प्रलोभनमा पार्नुभयो। लगनशीलता, एउटा सिद्ध काम हुनुपर्दछ, ताकि तपाई परिपूर्ण र पूर्ण हुनुहुनेछ र केहि कमी छैन"। (जेम्स १,२-।)।
एक जना इसाईको जीवनमा कठिन समयहरूमा आत्मिक फल फलाउन, उसलाई सिद्ध बनाउन भनिएको छ। परमेश्वर हामीलाई समस्याबिना जीवनको प्रतिज्ञा गर्नुहुन्न। "बाटो साँघुरो छ," येशूले भन्नुभयो। कठिनाइ, परीक्षा र सतावटले एक मसीहीलाई तनाव र निराशमा पार्नुहुँदैन। प्रेरित पावलले लेखे:
«हामी सबै कुरामा सताइएका छौं तर कुचिएको छैन; कुनै बाटो छैन तर हामी हिंड्दैछौं। तल गिर्‍यो तर नष्ट भएन » (१ कोरिन्थी १२: -2-।)
जब भगवानले हाम्रो जीवनलाई नियन्त्रणमा लिनुहुन्छ, हामी कहिले पनि त्याग्दैनौं, आफैमा निर्भर हुँदैन! यस सन्दर्भमा, येशू ख्रीष्ट हाम्रो लागि एक आदर्श मोडेल हुनुपर्छ। उहाँ हाम्रो भन्दा अगाडि हुनुहुन्छ र हामीलाई साहस दिनुहुन्छ:
“मैले यो तिमीहरूलाई भनेको हुँ ताकि तपाई ममा शान्ति रहोस्। तपाईं संसारमा पीडित हुनुहुन्छ; तर राम्रै खुशी हुनुहोस्, मैले संसारलाई जितेको छु » (यूहन्ना १:16,33:१)
येशू चारै तिरबाट थिचोमिचोमा पर्नुभयो, उनले सतावट, सतावट, क्रूसीकरणको अनुभव गरे। ऊ सायद एक शान्त क्षण थियो र अक्सर मानिसहरूबाट भाग्नु पर्ने थियो। येशू पनि सीमा मा धकेलिएको थियो।
His आफ्नो शरीरका दिनहरूमा उनले मृत्युबाट बचाउन सक्ने व्यक्तिलाई कडा चिच्याएर र आँसुको दुबै बिन्तीहरू र अन्तरबिन्तीहरू गरे र परमेश्वरको डरको कारण सुनेका थिए र जे भए पनि उनी छोराले गरेका कुराबाट उनले सिकेका थिए। आज्ञाकारी हुन; र सिद्ध छ, उहाँ सबै आज्ञा पालन गर्नेहरूका निम्ति अनन्त मुक्तिको लेखक बन्नुभयो, जो मल्कीसेदेकको आदेश अनुसार प्रधान पूजाहारीको रूपमा परमेश्वरद्वारा अभिवादन गरिएको थियो। (हिब्रू:: -5,7-११)
येशू आफ्नो जीवनलाई आफ्नै हातमा नलिईकनै आफ्नो जीवनको अर्थ र उद्देश्यलाई बिर्सनुहुन्न ठूलो तनावमा जिउनुभयो। उहाँ सधैं परमेश्वरको इच्छाको अधीनमा बस्नुभयो र बुबाले अनुमति दिनुहुने जीवनको हरेक परिस्थिति स्वीकार्नुभयो। यस सम्बन्धमा, हामी येशूबाट निम्नलिखित रोचक कथनहरू पढ्यौं जब उहाँ वास्तवमै घेरिएको थियो:
«अब मेरो प्राण निराश छ। र म के भन्न सक्छु? हे बुबा, मलाई यो घडीबाट बचाउनुहोस्? तर यसैले म यस घडीमा आएको हुँ » (यूहन्ना १:12,27:१)
हामी जीवनमा हाम्रो वर्तमान अवस्था पनि स्वीकार्छौं (परीक्षा, बिमारी, सulation्कष्ट, आदि)? कहिलेकाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा विशेष गरी अप्रिय परिस्थितिहरूको अनुमति दिनुहुन्छ, वर्षौंसम्म परीक्षाहरू जुन हाम्रो गल्ती होइनन्, र हामीलाई ती स्वीकार्न अपेक्षा गर्दछन्। हामी यस सिद्धान्तलाई पत्रुसले निम्नलिखित कथनमा पाउँछौं:
«किनकि यो अनुग्रहको कुरा हो जब कोही परमेश्वरसामु विवेकले गर्दा दु: ख सहन्छ, किनकि उसले गलत तरिकाले दु: ख भोग्दछ। किनकि जब तिमीले यस्ता पापीहरू जस्तै पिटेर पिटिएका छौ भने यो कत्ति गौरवको कुरा हो? तर यदि तपाईले दु: ख र कष्टमा निरन्तर लागिरहनु भएको छ भने, यो परमेश्वरको अनुग्रह हो। किनकि तपाईंलाई यसमा बोलाइएको हो; किनकि ख्रीष्टले पनि तपाईंको खातिर दुःख भोग्नुभयो र उदाहरण बसाल्नुभयो ताकि तपाईं उहाँको पाइला पछ्याउन सक्नुहुन्छ: जसले पाप नगरेको र उहाँसँग कुनै छलछाम गरेको छैन त्यो मुखमा गाली गरियो र फेरि कहिल्यै ब्यूँझाइएको छैन, उसले कष्टको खतरा निम्त्याउँदैन। तर निष्पक्ष न्याय गर्नेलाई समर्पण गरियो » (१ पत्रुस २: -1 -१०)
येशू मृत्युसम्मै परमेश्वरको इच्छाको अधीनमा बस्नुभयो, उहाँ कुनै दोषबिना दु: ख भोग्नुभयो र कष्ट सहनुभयो। के हामी आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको इच्छालाई स्वीकार्छौं? जब हामी असन्तुष्ट हुन्छौं जब हामी निर्दोष रूपमा ग्रस्त हुन्छौं, सबै पक्षबाट दबाबमा पर्दछन् र हाम्रो कठिन अवस्थाको अर्थ बुझ्न सक्दैनन्? येशूले हामीलाई ईश्वरीय शान्ति र आनन्दको प्रतिज्ञा गर्नुभयो:
म तिमीलाई शान्ति दिन्छु, म शान्ति दिन्छु। जस्तो संसारले दिन्छ जस्तो म गर्दैन तिम्रो मुटु डराउने छैन, नडराऊ » (यूहन्ना १:14,27:१)
"मैले यो कुरा तपाईंलाई भनिसकेको छु कि मेरो आनन्द तपाईंभित्र रहोस् र तपाईंको आनन्द पूर्ण होस्।" (यूहन्ना १:15,11:१)
हामीले यो बुझ्नलाई सिक्नुपर्दछ कि दु: ख सकारात्मक छ र यसले आध्यात्मिक बृद्धि गर्दछ:
That त्यो मात्र होइन, हामी कष्टमा पनि घमण्ड गर्दछौं, किनकि हामीलाई थाहा छ कि दु: खले लगनशीलतालाई निम्त्याउँछ, तर लगनशीलताले यसले प्रमाणित गर्दछ, प्रोबेशनले आशा जगाउँदछ; तर आशा लाजमा पर्दैन, किनभने पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खन्याइएको छ। (रोमी .5,3.२5-२XNUMX)
हामी स distress्कष्ट र तनावमा बाँचिरहेका छौं र परमेश्वर हामीबाट के आशा गर्नुहुन्छ भनेर बुझ्यौं। त्यसकारण हामी यस अवस्थालाई सहन्छौं र आध्यात्मिक फल फलाउँछौं। परमेश्वरले हामीलाई शान्ति र आनन्द दिनुहुन्छ। हामी यसलाई कसरी अहिले अभ्यासमा राख्न सक्छौं? येशूबाट निम्न अद्भुत कथनलाई हेरौं:
Me मकहाँ आऊ, तिमी सबै कठोर र बोझले थियौ! र म तिमीलाई आराम दिनेछु मेरो जुवा तिमी आफैंमा लिनुहोस् र मबाट सिक्नुहोस्! किनभने म विनम्र र मुटुको नम्र छु, र "तपाईंले आफ्नो प्राणको निम्ति विश्राम पाउनुहुनेछ"; किनकि मेरो जुवा कोमल छ र मेरो भारी हलुका छ » (मत्ती १०: १ -11,28 -२०)
हामी येशू आउनु पर्छ, तब उसले हामीलाई आराम दिनेछ। यो एक निश्चित प्रतिज्ञा हो! हामीले आफ्नो बोझ उहाँमाथि राख्नु पर्छ:
«अब आफूलाई परमेश्वरको शक्तिशाली हातमुनि नम्र बनाउनुहोस् ताकि उहाँले तपाईंलाई ठीक समयमा उचाल्न सक्नुहुन्छ, [कसरी?] तपाईंको सबै हेरचाह उहाँमा राखेर! किनभने उहाँ तपाईंको चिन्तित हुनुहुन्छ » (१ पत्रुस:: 1--।)
हामी कसरी चिन्ता गर्छौं परमेश्वरमा? यहाँ केहि बिन्दुहरू छन् जुन हामीलाई यस सन्दर्भमा मद्दत गर्दछ:
हामीले आफ्नो सम्पूर्ण अस्तित्व परमेश्वरमा सुम्पनु पर्छ र सुम्पनु पर्छ।
हाम्रो जीवनको लक्ष्य भनेको परमेश्वरलाई खुशी पार्नु हो र हाम्रो सम्पूर्ण अस्तित्व उहाँकै अधीनमा राख्नु हो। जब हामी सबैलाई खुशी पार्ने प्रयास गर्दछौं, त्यहाँ झगडा र तनाव छ किनकि यो सम्भव छैन। हामीले हाम्रा सँगी मानवहरूलाई आफुलाई दु: खमा पार्ने शक्ति दिन हुँदैन। केवल भगवानले हाम्रो जीवनमा शासन गर्नुपर्दछ। यसले हाम्रो जीवनमा शान्ति, शान्ति र आनन्द ल्याउँछ।
परमेश्वरको राज्य पहिले आउनुपर्दछ।
कुन कुराले हाम्रो जीवनलाई चलाउँछ? अरुको मान्यता? धेरै पैसा कमाउने इच्छा छ? हाम्रा सबै समस्याहरू हटाउन? यी सबै लक्ष्यहरू हुन् जसले तनाव निम्त्याउँछन्। हाम्रो प्राथमिकता केमा हुनुपर्दछ भनेर भगवान् स्पष्ट रूपमा भन्नुहुन्छ:
«यसैले म तिमीलाई भन्छु: आफ्नो जीवनको लागि, के खानु पर्छ र के पिउनु पर्छ भन्ने विषयमा चिन्ता नगर, वा आफ्नो शरीरको लागि, के लगाउनु पर्छ त्यो चिन्ता नगर। खानेकुरा भन्दा जीवन धेरै छैन र शरीर कपडा भन्दा बढी? आकाशका चराहरूलाई हेर, तिनीहरू नता रोप्दछन्, न अन्न काट्छन, न भकारीहरूमा जम्मा गर्छन्, अनि तपाईंको स्वर्गका पिताले तिनीहरूलाई हेरचाह गर्नुहुन्छ। तपाईं तिनीहरू भन्दा धेरै मूल्यवान छैन? तर तपाईं मध्ये कसले आफ्नो जीवनकालको चिन्ता सहित एक यार्ड थप्न सक्नुहुन्छ? र तपाईं किन कपडाको चिन्तामा हुनुहुन्छ? मैदानको लिलीहरू हेर्नुहोस् जब तिनीहरू बढ्छन्। तिनीहरू स ,्घर्ष गर्दैनन्, न त घुमाउँछन्। तर म तिमीलाई भन्दछु कि सुलेमान जस्ता राजा आफ्नो समस्त वैभवको साथ पनि यी फूलहरूमा झैं एउटा वस्त्र पहिरिएको थिएन। तर यदि भगवानले मैदानको घाँसको पोशाक लगाउनु भएको छ जुन आज खडा छ र भोलि चुल्हामा फालिन्छ भने, हे साना विश्वासीहरु हो, उसले तपाईलाई धेरै गर्ने छैन। त्यसोभए चिन्तित नहुनुहोस्: हामीले के खानु पर्छ? वा: हामीले के पिउनु पर्छ? वा: हामीले के लगाउने? यी सबै चीजहरू ती राष्ट्रहरू हुन्। किनभने स्वर्गमा बस्नुहुने पिताले तपाईंलाई यी सबै थोकको आवश्यक छ भनेर जान्नुहुन्छ। तर पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकता खोजी गर्नुहोस्! र यी सबै तपाईंलाई थपिने छन्। त्यसैले भोलीको बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस्! किनकि भोलि आफैंको ख्याल राख्छ। प्रत्येक दिन यसको खराबमा पर्याप्त छ। (मत्ती १०: १ -6,25 -२०)
जबसम्म हामी सबैभन्दा पहिला परमेश्वर र उहाँको इच्छाको ख्याल गर्छौं, उहाँले हाम्रा सबै अन्य आवश्यकताहरू पनि पूरा गर्नुहुन्छ!
के यो गैरजिम्मेवारपूर्ण जीवनशैलीको लागि निःशुल्क पास हो? होईन। बाइबल हामीलाई रोटी कमाउन र परिवारको हेरचाह गर्न सिकाउँछ। तर यो प्राथमिकता हो!
हाम्रो समाज अलमलमा परेको छ। यदि हामी होशियार भएनौं भने, हामी अचानक हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको लागि कुनै ठाउँ पाउने छैनौं। यसले एकाग्रता र प्राथमिकता लिन्छ, अन्यथा अचानक अन्य चीजहरूले हाम्रो जीवन निर्धारित गर्दछ।
हामीलाई प्रार्थनामा समय बिताउन भनियो।
हामीले प्रार्थनामा बोझहरू परमेश्वरमा बिसाउन हामीमाथि भर पर्छ। उहाँ हामीलाई प्रार्थनामा शान्त पार्नुहुन्छ, हाम्रो विचार र प्राथमिकताहरू स्पष्ट पार्नुहुन्छ र उहाँसँग नजिकको सम्बन्धमा ल्याउनुहुन्छ। येशूले हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण दिनुभयो:
"बिहान सबेरै उज्‍यालो भएपछि, उनी उठे र बाहिर निस्‍के र एकान्त ठाउँमा गए र प्रार्थना गरे। शिमोन र उनका साथीहरू पनि येशूलाई खोज्न हतारिए। तिनीहरूले येशूलाई भेटे अनि भन्नलागे, सबै तपाईंलाई खोजिरहेका छन » (मार्क १1,35--37)
येशू प्रार्थनाको लागि समय पत्ता लगाउन लुक्नुभयो! उहाँ धेरै आवश्यकताहरूबाट अलमल्ल हुनुहुन्न:
"तर उनको बारेमा कुरा सबै फैलियो; ठूलो भीड जम्मा भयो </ ihn> सुन्न र तिनीहरूको रोगबाट मुक्त हुन। तर उनी पछि हटे र एक्लो ठाउँहरूमा एक्लै प्रार्थना गरे। (लूका .5,15.१16-१)
के हामी दबाबमा छौं, तनाव हाम्रो जीवनभर फैलिएको छ? त्यसोभए हामीले पनि पछाडि फर्केर परमेश्वरसँग प्रार्थनामा समय बिताउनुपर्दछ! कहिलेकाँही हामी परमेश्वरलाई एकदमै चिन्न व्यस्त हुन्छौं। त्यसकारण नियमित तवरले परमेश्वरमा ध्यान केन्द्रित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
के तपाईलाई मार्ताको उदाहरण याद छ?
"तर जब ती मानिसहरू जाँदै थिए, येशू एउटा गाउँमा जानुभयो। मार्था नाउँ गरेकी एउटी आइमाईले उनलाई भित्र ल्याई। उनको मारिया नामकी बहिनी थिइन्, जो येशूको खुट्टामा बसेर उहाँको वचन सुनिन्। तर मार्था धेरै सेवामा व्यस्त थिए; तर उनी बाहिर आएरिन र भनिन्: “प्रभु, मेरो बहिनीले मलाई एक्लै छोडेर सेवा गर्न थाल्यो कि? उसलाई मद्दत गर्न भन्नुहोस्!] तर येशूले उसलाई जवाफ दिनुभयो, 'मार्था, मार्था! तपाई धेरै चिन्ता गर्नुहुन्छ र चिन्तित हुनुहुन्छ; तर एउटा कुरा चाहिन्छ। तर मारियाले राम्रो अंश छान्छन् जुन उनीबाट लिने छैनन » (लूका .10,38.१42-१)
अब हामी आराम गर्न समय निकालौं र परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राखौं। प्रार्थना, बाइबल अध्ययन र मनन गर्न प्रशस्त समय बिताऔं। अन्यथा यो हाम्रो भगवान मा हस्तान्तरण गर्न गाह्रो हुनेछ। भगवानमा हाम्रो भारी बोक्नको लागि आफैलाई तिनीहरूबाट टाढा राख्नु र विश्राम लिनु महत्त्वपूर्ण छ। The रूखहरुबाट ज seeing्गल देख्नुहुन्न ... »
जब हामी अझै सिकाइरहेका थियौं कि ईसाईहरूले पनि परमेश्वर शबाथ आरामको आशा राख्नुहुन्छ, हामीले एउटा फाइदा उठायौं: शुक्रवार साँझदेखि शनिबार साँझसम्म हामी परमेश्वर बाहेक अरू कसैको लागि उपलब्ध थिएनौं। आशा छ कि हामीले कम्तिमा हाम्रो जीवनमा आरामको सिद्धान्त बुझेका छौं र त्यसलाई कायम राखेका छौं। अब र त्यसपछि हामीले केवल स्विच अफ र आराम गर्नुपर्दछ, विशेष गरी यो तनावग्रस्त संसारमा। यो कहिले हुन्छ भनेर भगवान हामीलाई बताउँनुहुन्न। मानिसलाई केवल आराम चाहिन्छ। येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई आराम गर्न सिकाउनुभयो:
The प्रेरितहरू येशूकहाँ भेला भए; उनीहरूले गरेका र सिकाएका सबै कुरा उहाँलाई सुनाए। उहाँले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “तिमीहरू एक्लै बस, सुनसान ठाउँमा जाऊ र थोरै आराम गर। किनकि जो आउँछन् र गएका थिए धेरै जना थिए र खानसमेत पाएनन् did (मार्क,, -6०--30१)
यदि अचानक हामीसँग केहि खानको लागि समय छैन, तब यो निश्चित रूपमा स्विच अफ र केही आराममा निर्माण गर्न उच्च समय हो।
त्यसोभए हामी कसरी आफ्नो चिन्ता परमेश्वरमा राख्छौं? ध्यान दिनुहोस्:
• हामी हाम्रो सम्पूर्ण अस्तित्व ईश्वरको अधीनमा राख्छौं र उहाँमाथि भरोसा राख्छौं।
• परमेश्वरको राज्य पहिलो आउँछ।
• हामी प्रार्थनामा समय बिताउँछौं।
• हामी आराम गर्न समय लिन्छौं।
अर्को शब्दमा, हाम्रो जीवन परमेश्वर र येशू उन्मुख हुनुपर्दछ। हामी उहाँमा केन्द्रित छौं र हाम्रो जीवनमा उहाँलाई लागि ठाउँ दिन्छौं।
तब उसले हामीलाई शान्ति, शान्त र आनन्दले आशीर्वाद दिनेछ। उसको बोझ हल्का हुन्छ, यदि हामी सबै पक्षबाट दियौं भने पनि। येशू थिचिएको थियो, तर कहिल्यै कुचल्नुभएन। आउनुहोस्, हामी वास्तवमै परमेश्वरको सन्तानको रूपमा आनन्दमा बाँचौं र उहाँमा भरोसा राखी उहाँमाथि भरोसा राखौं र हाम्रा सबै बोझ उहाँमाथि फ्याँकौं।
हाम्रो समाजमा इसाईहरू, कहिलेकाँही बढि दबाबमा पर्दछ, तर भगवानले ठाउँ सिर्जना गर्नुहुन्छ, हाम्रो बोझ उठाउँदछ र हाम्रो हेरचाह गर्नुहुन्छ। के हामी यस कुरामा विश्वस्त छौं? के हामी परमेश्वरमा गहिरो भरोसा राखेर जीवन बिताउँछौं?
भजनसंग्रह २ 23 मा दाऊदले हाम्रा स्वर्गका सृष्टिकर्ता र प्रभुको वर्णनको साथ अन्त गरौं (डेभिड पनि प्रायः खतरामा पर्दछन् र चारै तरफबाट भारी दवाव दिइन्थ्यो):
“परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केहीको अभाव हुँदैन। उहाँले मलाई अझै पनि पानी छेउमा जान्छ, मलाई हरियो चराई मा सुताउनुहुन्छ। उहाँले मेरो प्राणलाई स्फूर्ति दिनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर धार्मिकताको बाटोमा मलाई गाइड। यदि मैले मृत्यु छायाको उपत्यकामा वृद्धि गरे पनि मलाई कुनै हानि हुने डर छैन किनकि तपाईं मसँग हुनुहुन्छ; तपाईंको छडी र कर्मचारीले मलाई सान्त्वना दिन्छ। तपाईंले मेरो शत्रुहरूका समक्ष मेरो निम्ति टेबल बनाउनुभयो; तिमीले मेरो टाउकोमा तेल घसिदियौ, मेरो कचौरा प्रशस्त छ। केवल दयालुता र अनुग्रहले मेरो जीवनको प्रत्येक दिन पछ्याउँदछ; म फेरि परमप्रभुको मन्दिरमा जीवन पाउनेछु। (भजन .23..XNUMX)
डेनियल Bösch द्वारा